FBC - Paartileen siyaasaa marii marsaa 3ffaa xumuruun, marii biraatif Fulbaanatti beellama qabatan
Paartileen siyaasaa marii marsaa 3ffaa xumuruun, marii biraatif Fulbaanatti beellama qabatan
Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Paartileen siyaasaa biyyoolessaa 16n keeyyattoonni dabalataa maallaqa hoji raawwachiistuuf isaan barbaachisu mootummaarraa akka argatan taasisuu fi labsii galmee paartilee siyaasaarratti akka ida’aman waliigalan.
Torbee 3f labsicharratti mariin gaggeessaa turan har’a waliigalteedhan xumurameera.
Labsii filannoo 532 irratti mariin taasisanis, Fulbaanaa kaasee kan gaggeeffamu waliigalaniiru.
Paartileen siyaasaa kanneen labsii keeyyata 63qabu 3tti hiruun irratti mari’achaa turaniiru.
Keeyyattoonnii fi keeyyattoonni xiqqaa 13 akka ida’aman, 13 ammoo akka fooyya’anii fi muraasni akka haqaman waliigalaniiru.
Keeyyata 1 amma 31tti marii gaggeeffameen, keeyyattoonni haaraan 7 akka dabalaman kan waliigalame yammuu ta’u, labsiiwwan haaraa keessaa 1 of danda’ee, isaan hafan 7 ammoo keeyyattoota xixiqqaa isaan jiranirratti kan ida’amani.
Marii marsaa 2ffaa keeyyata 32 amma 42tti jiranirratti taasisaniinis, keeyyattoonni haaraan 3 akka ida’amanii fi muraasnimmoo akka sirreeffaman waliigalaniiru.
Marii marsaa 3ffaan ammoo keeyyata 42 amma 63tti kan jiran ilaalaniiru.
Haaluma kanaan keeyyattoonni xiqqaa 3 akka ida’amanii fi keeyyanni xiqqaan 1 akka haqamu waliigalaniiru.
Paartileen biyyoolessaa waliin mari’achaa jiran Fulbaana dhufurraa kaasee labsii filannoo lakkoofsa 532/99 irratti mari’achuuf beellama qabatanii addaan ba’aniiru.
Oduuwwan Biroo « DhDUO raawwii hojii fi kallattii karoora bara 2010 irratti mari’achaa jira	Piroojaktoonni humna meeggaa waatii kuma 1 ol maddisiisan sababa hanqina ‘faayinaansiin’ yeroo qabameef keessatti hin-jalqabamne »